Fiovana sy fanovana… | NewsMada
Fiovana sy fanovana…
Miarahaba sy mirary soa ho antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2016 ny eto amin’ny gazery Taratra. Mba ho taona hitondra fiovana sy fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa anie ity taona hodiavintsika ity, fa tsy hoe ny dimy fotsiny no niova enina eo amin’ny tetiandro na ny kalandrie.
Andrandraina sy antenanina izany, ho antsika rehetra na eo aza ireo olana samihafa mbola mitoetra sy ny fahasahiranana miseho amin’ny endriny maro.
Mba hiova fo sy hihavao ny fomba fanaovana politika ka hahay hifanabe sy hifampitaiza ireo mpanao politika fa tsy hifampiana-dratsy lalandava eto foana. Iaraha-mahalala fa efa teo ireo zokiny. Nandalo teo koa ireo zandriny, saingy tsy nitondra inona sy ahoana ho an’ny firenena izany. Tsy niantraika amin’ny fiainan’ny mponina mivantana ny nataon’izy ireo. Vao mainka aza niharatsy kokoa hatrany.
Mba hitsinjo ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka malagasy izy ireo fa tsy ny an’ny antoko na ny fianakaviana sy ny tena na koa ny namana hatrany.
Aoka koa tsy hijerena loko politika ny fampandrosoana ny firenena. Fa na mikravaty manga na mena na miakanjo vonimboasary na koa ny ivelan’ireo, tokony hahazo ny anjara masoandrony avokoa. Fa tsy hoe manga ny lanitra ho an’ny sasany fa haizim-pito ho an’ny hafa.
Firariantsoa sy faniriana ihany izany rehetra izany mba tsy hitombina intsony ilay hiran’i Mahalelo, novazoiny tetsy Mahamasina ny 31 desambra teo : « Ny taona ity miherina. Asa izay mba hoentiny. Ahiko mbola hiverina toy ny tamin’ny taona lasa ny zava-raketiny. Fa ny fanantenana, efa mihena mitsilopy. Fa tsy misy fahatsarana, izay mety ho fiovana efa zary nofinofy…».